‘साहो’को लागि हिन्दी भाषा सिक्दै प्रभास ! « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
‘साहो’को लागि हिन्दी भाषा सिक्दै प्रभास !
एजेन्सी । ‘बाहुबली’ बाट चर्चामा आएका दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास बलिउड फिल्म साहोका लागि हिन्दी भाषाको कक्षा लिंदैछन् । यस फिल्ममा प्रभासको अपोजिटमा नायिका श्रद्धा कपुरले साथ दिने भएकी छन् ।प्रभासला्ई साउथ इन्डियन भाषा बोल्न कुनै कठिन नपरेपनि उनलाई हिन्दी भाषा राम्रोसँग बाृेल्न आउँदैन । यो फिल्म एकैचोटी तीन भाषमा रिलिज हुने बताइएको छ । नायक प्रभास यतिबेला आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘साहो’ को तयारी गरिरहेका छन्। प्रभासलाई सामान्य हिन्दी बोल्न आएपनि स्पेशल डायलगहरुमा कठिनाई आएपछि भाष कक्षा लिन आग्रह गरिएको थियो ।
उनले आफू हिन्दी पढ्न र लेख्न सकेता पनि घरमा बोल्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार, घरमा कसैले हिन्दी भाषा बोल्दैनन् र बुझ्दैनन् । उनी भन्छन्, मैले ‘साहो’ का लागि एक महिनाको हिन्दी क्लासेस लिएको छु । हिन्दी शिक्षकले मलाई डाइलग सिकाएका छन् । मैले यस फिल्मका लागि निकै होमवर्क गरेको छु ।